Olee otú Twitter ga-esi enyere ndị ahịa aka karịa? - Ihe nmalite na-enye azịza ya
Twitter nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ ọtụtụ ndị ahịa. Maka webmasters na-emeso Social Media Marketing (SMM), ị nwere ike ime ọtụtụ mgbalị ndị nwere ike ma ọ bụ na-agaghị amị mkpụrụ. Andrew Dyhan, Semalt Onye ahịa na-ahụ maka ndị ahịa, na-enye anyị ohere ịtụle ụzọ ndị a ga - esi jiri Twitter mee ka SEO gị nwee mmeri:
Gbaa mbọ hụ na foto, na vidiyo na-egosi - asphalt tennis court timonium. Mgbe ị na-eme SEO, ihe oyiyi na ọdịnaya vidio na-enyekwa aka dị ka ihe dị elu. N'okwu a, e nwere ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ si eji ọdịnaya gị eme ihe. Ọzọkwa, foto nwere ike inyere gị aka ime ka UX nke saịtị gị mara mma.
Chọta nsonaazụ ọchụchọ ziri ezi. Nchọpụta nyocha ihuenyo kwesịrị ekwesị nwere ike mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị pụta na oge ahụ na-eme ka ọ na-enye ọtụtụ ego. Ị nwere ike iji nsonaazụ ọchụchọ iji mee ka Twitter nweta ndị ahịa maka ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọdịnaya dị mma na okwu. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-ekwu okwu na okwu ha. N'okwu a, ndị mmadụ nwere ike ichefu iji akụkụ a mgbe ị na-eme SEO maka ụlọ ọrụ. Enwere ike ịnwe akụkụ ndị ọzọ nke blog nke na-eme ka ọtụtụ ndị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Twitter nwere ike inyere gị aka ịmepụta ọrụ ndị a yana ịme ka ihe ndị a na-arụ ọrụ ọnụ.
Jide egwuregwu. Ime egwuregwu na Twitter nwere ike inyere ndị mmadụ aka ịpụta ọtụtụ akụkụ nke ịmepụta mgbasa ozi..Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume itinye ndị na-ege gị ntị aka na Twitter. Twitter bụ ngwá ọrụ ahịa dị ike nke onye ọ bụla webmaster kwesịrị iji.
Jiri blog. Ike nke blog ka na-abanye na ntanetị ịntanetị. Iji blog nwere ikikere nwere ike ime ka ndị mmadụ chebaa ozi ha na-agbalị ime ka ha na-eme mgbanwe ndị dị mkpa iji mee ka mkpọsa mgbasa ozi gị nwee ọganihu. Ị nwere ike jikọọ blog gị na Twitter maka uru kachasị.
Na-azaghachi na ndị na-ege ntị ziri ezi. Na Twitter, ọtụtụ ndị nwere ike ikwu maka tweets maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Ị nwere ike ịhapụ ndị a site na ileghara ihe ndị na-adịghị njikere ịbụ ndị ahịa gị anya. Ọzọkwa, blog nwere ike ime ka ndị na-eso Twitter gị bụrụ ndị na-eme ka ndị ahịa dị njikere ịtọghata ndị ahịa.
Retweet ọma. Retweeting yiri ka ọ bụ ihe kachasị mfe nke iji Twitter ikwu okwu. Ndị mmadụ na-ezipụ tweets site na akaụntụ ndị ọzọ iji mee ka ụmụazụ ha hụ ozi ahụ. Maka ndị ọrụ chọrọ ime mgbanwe dị mkpa maka mgbasa ozi mgbasa ozi ha, ọ dị mkpa ka ịchọta ọdịnaya site na isi iyi ego, iji mee ka usoro ahụ dum dị iche iche.
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ na-ejikarị Twitter mee ihe maka ọrụ SEO na ọrụ azụmahịa . N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ na-eji usoro mgbasa ozi ahụ ruo ọtụtụ nde ndị ahịa niile n'ụwa nile. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-enyere aka n'ịme mgbasa ozi mgbasa ozi. E nwere ụzọ ndị ọzọ nke na-enyere ndị webmasters aka iru ndị na-ege ha ntị. Ị nwere ike iji ntuziaka a mee ka SEO ma ọ bụ SMM gbasaa mmeri. Ọzọkwa, Twitter nwere ike inyere mgbasa ozi gị aka ịmepụta ọtụtụ ndị ahịa na ebe nrụọrụ weebụ gị.